Fiba 3 x 3 Africa Cup 2019 Laharana faha-4 no azon’i Madagasikara
Resin’i Egypte 21 -11 ny ekipa lehilahy Malagasy teo amin’ny manasa-dalan’ny fifaninanana « Fiba 3 x 3 Africa Cup 2019 » omaly alahady 10 novambra 2019 tany kampala Ouganda ka nihamina
PRO LEAGUE MALAGASY Andro faha-3 Resy an-kianjany avokoa ny Zanakala Fc sy ny Elgeco Plus
Azo avokoa ny vokatra rehetra teo amin’ny fifaninanana Pro League Malagasy andro faha-3, tamin’ireo lalao natao tamin’ny sabotsy 9 sy omaly alahady 10 novambra 2019 ka nisongadinan’ny mbola
RUGBY AFRICA Men’s Sevens 2019 Tafita hiatrika ny Lalao Olimpika Tokyo 2020 ny Kenyana
Tafita hiatrika ny Lalao Olimpika Tokyo 2020 ny ekipa Kenyana amin’ny taranja rugby à 7 rehefa nandavo 29-0 ny ekipan’i Ouganda
BAREA CAN 2021 Tonga ihany i Romain Metanire
Efa saika tonga eto Antananarivo avokoa ny ankamaroan’ireo mpilalao mpila ravinahtra nantsoina hanatevina ny Barea CAN 2021 hifanandrina amin’ny ekipan’i Ethiopie amin’ny sabotsy 16 novambra izao etsy Mahamasina.
raha nihaona sy nitafatafa tamin’ny praiminisitra Ntsay Christian teny amin’ny lapan’i Mahazoarivo tamin’ny alakamisy 03 oktobra maraina teo amin’izao ankatoky ny hiaingan’izy ireo handeha hamonjy an’Antsiranana izao izay toerana hanatanterahana ny fiadiana ny tompondakam-pirenena amin’ireo taranja fanatanjahantena ho an’ny mpiasam-panjakana (Ny 07 ka hatramin’ny 20 oktobra 2019 ho avy izao). Nifampiresahana tamin’izany ny amin’ny hahazoan’ny governemanta mitondra ny anjara birikiny amin’ny hoenti-manatanteraka ity fihaonana ara-panatanjahantena ity ka nojerena indrindra ny amin’ny tetibola tokony hanampian’ireo minisitera tsirairay avy an’ity hetsika ity mba hisian’ny fitoviam-pijery sy fitovian-jo eo amin’ny samy mpiasam-panjakana handray anjara amin’ny fifaninanana ka tsy hisy ny fametrahana mpiara-miasa na mpiasam-panjakana ho ambony kokoa noho ny rehetra. Izay no manamarina ny fiombonana, hoy ny praiminisitra. Notsiahiviny fa efa ela no nisy ity fihaonana ara-panatanjahantena ity ary nekena ny hitohizany, saingy aorian’ny fotoan’ny fifanintsanana dia tokony hisy ny fivoriana hanatsarana sy handrindrana ny fanatanterahana ny tanjona nametrahana ny « ASIEF ».
Filaharana ASIEF tetsy Anosy (Tahirin-tsary)